नेकपाको एकता भोलि टुंगिने, पार्टीभित्र चुलियो बैचारिक बहस – Rajdhani Daily
नेकपाको एकता भोलि टुंगिने, पार्टीभित्र चुलियो बैचारिक बहस
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकताको टुंगो शुक्रबारसम्म लाग्ने भएको छ । शीर्ष नेतृत्व तह भ्रातृ संगठन एकता टुंगो लगाउने गृहकार्यमा समेत जुटेका छन् । पार्टी प्रदेश र जिल्ला कमिटी एकता घोषणा गरिसकेको नेकपाले भ्रातृ संगठनको एकता टुंगोमा पु¥याउन छलफल अघि बढाएको छ । भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीस“ग अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले एकता विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
सबै एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेगरी बिहीबार बिहानै छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । पार्टी एकताका सबै प्रक्रिया पूरा भएको घोषणास“गै मुलुकभर नयाँ जोश र जाँगरसाथ पार्टी गतिविधि अघि बढाउने तयारीसमेत भएको छ ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले अगामी शुक्रबार पार्टी एकीकरण टुंगिएको घोषणा हुने जानकारी दिए । एक वर्षअघि ३ जेठमै नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएको थियो ।
‘एकताका धेरै महŒवपूर्ण काम सकिए पनि केही बाँकी छन् भनेर गुनासो आइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘अब गुनासा धेरै दिन सुन्नुपर्दैन । पार्टी एकताका सबै प्रक्रिया पूरा हुनेछ । भोलि बिहान एकता प्रक्रियाका बाँकी विषय टुंगिएको घोषणा हुनेछ ।’
त्यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै पार्टी एकता समयमै टुंग्याउन नसकेको अवस्थामा जनविश्वास घटेर जाने प्रथिक्रिया दिए । असन्तुष्टि सम्बोधन गरी पार्टी एकता टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । ‘जनविश्वास जित्न बाँकी नै छ,’ वरिष्ठ नेता नेपालले भने, ‘जनसंगठन र स्थानीय तहसम्म पार्टीभित्र मनमुटाव नहुनेगरी एकता टुंग्याउनुपर्छ ।’
आफूहरूले ५५ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको बताउ“दै उनले दुई तिहाई नभएर सबैले अहंकार छाड्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘जनताको मन जित्ने काम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘अहंकारी दृष्टिकोण, गलत चिन्तन र सर्वश्रेष्ठताको भ्रमले पतनतर्फ डो¥याउनेछ, नेतृत्वको काम र व्यवहारले तल्लो तहसम्मका पार्टी पंक्तिको मन जित्न सक्नुपर्छ ।’ कम्युनिस्ट नेताको आचरण र व्यवहार परीक्षणमा रहेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले सबै जनसंगठनले आपसमा मनमुटाव नराखी काममा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
‘हाम्रो आचरण र व्यवहारमा कतै ठुला समस्या त खडा भएका छैनन् ? अनौठोखाले विकृति झांगिएका त छैनन् ? पारदर्शिता छ कि छैन ? कमिटीभित्र सबै कुरा छलफल हुन्छ कि हँुदैन ? काम बाँडफाँड गरिन्छ कि गरिन्न ? योग्यताको मूल्यांकन गरिन्छ कि गरिँदैन ? सबै बुझौं,’ उनले भने, ‘नेतृत्वको व्यवहारले नै सबैको मन जित्न सकिन्छ ।’
अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जनवर्गीय संगठन एकीकरण तत्काल टुंगो लाग्ने दाबी गरे । भोलि शुक्रबारसम्म नटुंगिए जेठभित्र सबै काम सकिने उनको भनाइ छ । नेकपाका अधिकांश कमिटी एकीरकण भए पनि जनवर्गीय संगठन एकीकरण भने बाँकी नै छ ।
पार्टीभित्र वैचारिक ध्रुवीकरण
पार्टी एकीकरणको एकवर्ष पुगेकै बेला सत्तारुढ नेकपामा वैचारिक ध्रुवीकरण देखिन थालेको छ । लामो समयदेखि सुसुप्त अवस्थामा रहेको वैचारिक बहस सुरु भएको छ । युवासंघ स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार अध्यक्षमध्येका पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालका साथै पार्टी महासविच पौडेलस“गै सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल एकै मञ्चमा आपस टिकाटिप्पणी गर्नेमा उत्रिए ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदा एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादीको ‘माओवाद’ स्थगित गरी ‘जनताको जनवाद’ मान्ने भनिएको थियो । यद्यपि, ‘जनताको जनवाद’बारे विवाद भने कायमै छ ।
पार्टी सचिवालय सदस्य रहेका पोखरेलले ‘नेकपामा अहिले प्रष्ट राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा नभएको’ भन्दै ‘अब त्यसबारे पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने’मा जोड दिए । एकीकरणदेखि नै तत्कालीन एमालेले बोक्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनुपर्ने बताउँदै आएका पोखरेलले यसबीच विभिन्न ठाउँमा यही धारणा राख्दै आएका छन् ।
पोखरेलले यस्तो विचार राख्दा र तत्कालीन माओवादीको नीतिको आलोचना गर्दा नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी पंक्तिबीच असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ ।
पार्टीमा अध्यक्ष ओलीका साथ पोखरेलले सबै नेतृत्वले वैचारिक बहस थालनी हुनुपर्ने धारणा राखे । अर्का अध्यक्ष दाहालले पोखरेलमाथि कटाक्ष गरे । उनले ‘पुराना विचार बोक्दै जाने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी नै बन्न नसक्ने’ बताए । गीता, बाइबल र कुरानजस्ता ‘धर्मशास्त्र माक्र्सवाद होइन’ भन्दै ‘विचार सिद्धान्तमा निरन्तर प्रयोग र विकास हुँदै जाने भएकाले छाडिसकेका विचार सिद्धान्तप्रति मोह त्याग्नुपर्ने’ उल्लेख गरे ।
‘सही विचार सधैंका लागि केही पनि हुँदैन, निरन्तर बहस र अन्तक्र्रियाबाट नयाँ विचार बन्छ,’ उनले भने, ‘एउटै विचार सही छ भनेको भए यहाँ आइपुग्ने थिएनौं । कि युद्धमा जित्थ्यौं वा मरेर सिद्धिन्थ्यिौं । शान्ति भन्ने पनि शान्तिमै सिद्धिन्थ्यौं । आज प्रधानमन्त्रीमन्त्री बनेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना बाँड्ने ठाउँमा आउने थिएनौं ।’
Tags: भोली नेकपाको एकता टुंगिने